10 Koorsooyinka Tababarka Microsoft waxay bedeli doonaan qaabka aad u fakarto | ITS
"Waxaan had iyo goor u go'aaminaa asxaabteena shaqadayada, waxaanan u maleynayaa [Shahaadada Microsoft] waa habab aad u wanaagsan oo muujinaysa daacadnimada daacadnimada wanaagsan ee ku haboonaantaada, iyo inaad u muujiso shakhsiyaadka kale ee aad haysato waxa ay qaadato si aad u qaadato tallaabo loo baahan yahay. Qaar ka mid ah Tababarka iyo Shahaadada Microsoft waa sidan soo socota:
Windows Azure Solutions oo leh Microsoft Visual Studio 2010
Isku xirka Microsoft Windows server 2012
Nidaamka aasaaska maamulka Microsoft Windows Server
Xarunta Microsoft Xarunta 2012 Orchestrator SCOM
Macmiilka Microsoft SQL Server 2014 Macluumaadka
Maamulaha Microsoft Exchange Server iyo Amniga
Koorsada Tababarka Microsoft iyo Shahaadada
1. Windows® Azure ™ Solutions oo leh Microsoft® Visual Studio® 2010
2. Bilaabidda VBA ee Excel 2010
Maxay u Isticmaalaan VBA-ga Excel 2010?
3. Tababarka Windows Server 2016: Isku xirka
4. Aasaaska Maamulaha Macmiilaha: MTA Imtixaanka 98-365
5. Xarunta Xarunta 2012 Orchestrator
6. Macmiilka Microsoft SQL Server 2014 Macluumaadka
9. Maamulaha Microsoft Exchange Server iyo Amniga
10. Waxbarashada Microsoft Exchange Server 2013
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo shahaadada waa hindise yaqaan ah in loo qaybiyo xisaabinta iyo gaar ahaan Microsoft ee bixinta daruur furan ee Windows Azure. Windows Azure waxaa loo cadeeyay Microsoft oo ah qaab shaqo oo loogu talagalay "daruur". Fasaladdan, waxaad baadhi doontaa qaabkan shaqo ee daruuraha ah ee dariiqa shaqeynaya iyo sidii loo dhisi lahaa sida loo abuuro, loo gudbiyo loona shaandheyn karo .NET codsiyada Azure.
Fasalkan waxaa loogu talagalay kuwa horumarineed ee NET ee leh arjiga codsiga Webka kuwaas oo baaraya codsiyada cusub ee sii kordhaya ama u gudbinta codsiyada jira ee Windows Azure
Inay fahmaan xisaabinta qaab dhismeedyada kala duwan iyo sida Windows Azure ku habboon tahay goobaha loo qaybiyo xisaabinta.
Ogow sababta ururradu u baahan yihiin inay codsi ku galaan dariiqa Azure.
Fahmso injineernimada Casure.
Baadhitaanada Azure SDK iyo bey'ad wanaajinta (Hagaajinta iyo Kaydinta Emulators).
Feejignaan sida loo abuuro barnaamijyada Azure iyo sida isbeddelka ka soo baxa horumarinta codsiyada 'caadiga ah'.
Dhiibaan oo soo gudbiyaan arjiga ASP.NET Webka (Web Role) ilaa Azure.
Jaantus sida loo sameeyo oo loo gudbiyo codsiyada xisaabinta aasaasiga ah (Worker role) ee Azure.
Baadhista awooda kaydka Azure si loogu daro miiska, laynka iyo boodada.
Falanqeeyaan SQL Azure, xogta bulshada ee dariiqa.
Ka fikir sida SQL Azure ay uga soo horjeedo kaydinta Azureer.
Soo-jeedimaha Visual Basic for Applications (VBA) ee Excel 2010 macaamiisha xakameynta macaamilka ee aan weli aheyn injineernimo. Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay dulucda VBA-da, tilmaamaha habka ugu fiican ee lagu heli karo VBA-ga Excel 2010, oo ah faahfaahin muujinaysa jawaabta runta ah ee barnaamijka Excel VBA, iyo talooyin ku saabsan barnaamijka iyo baaritaanka. Maxay u Isticmaalaan VBA-ga Excel 2010?
Microsoft Excel 2010 waa qalab cajiib leh oo aad isticmaali karto si aad u kantarooliso, u kala saarto, una muujiso macluumaadka. Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha ahaatee, inkasta oo ay ku jiraan hannaanka hodanka ah ee qaybta Excel (UI), waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad heshid hab aan yareyn oo lagu ciyaaro si aan loo dhigin, ama meel kale oo aan wax u dhimin UI u muuqato cinwaanka. Nasiib wanaag, Arjiyada Xafiiska sida Excel waxay leeyihiin Visual Basic for Applications (VBA), lahjad barnaamij ah oo ku siinaysa kartida aad ku kordhiso codsiyadaas.
VBA wuxuu u shaqeeyaa adoo adeegsanaya macruuf, hab fiican oo amar ah oo lagu qoray Visual Basic. In la ogaado sida barnaamijku u muuqan karo inuu yahay boodbood, haddana ay jiraan qaar ka mid ah duruufaha iyo sawirro yar, tusaale ahaan, kuwa ku jira maqaalkan, macaamiisha badan ayaa fiirsada in xitaa qiyaas yar oo ka mid ah VBA code ay shaqadeeda ka dhigayso mid ka sii yar oo dalbanaysa Awoodda si ay wax uga qabato Xafiiska oo aanay rumaysan inay yihiin kuwo la rumaysan karo. Markaad qaadato qaar ka mid ah VBA, waxay u muuqataa in ay noqoto mid aad u fudud in la qaato marka la isku daro dhamaantiis - sidaas darteed natiijooyinka la taaban karo ee halkan waa mid aan xad lahayn.
Marka la qaato tallaabo dheer oo ah midka ugu ballaaran ee loo adeegsan karo isticmaalka VBA ee Excel waa in la dhufto waxqabadyo aan caqli gal ahayn. Tusaale ahaan, waxaad ku qaadataa in aad haysatid buugag jimicsi ah oo dhowr ah, mid kasta oo ka mid ah labo xaashiyood oo dukuminti ah, mid kastaana wuxuu u baahan yahay isbeddel yar oo la sameeyey. Horumarku wuxuu noqon karaa mid toos ah adoo adeegsanaya qorshe cusub oo ku saabsan qadar qadar ah oo unugyada ama maskax ahaan sida bogsashada oo kale oo ka mid ah sifooyinka dhabta ah ee macluumaadka ku yaal xaashid kasta, ka soo qaadashada qaabka ugu fiican ee garaafka si aad u muujiso macluumaadka leh tayadaas, iyo ka dib in sameeynta iyo abaabulidda jaantuska si habboon.
Si kastaba ha noqotee, waxaad u maleyneysaa inaadan u baahnayn inaad ka soo baxdo hawlahaas, si kasta oo aaney aheyn ama ka weyneyn. Taas bedelkeeda, waxaad maareyn kartaa hawlaha adiga oo isticmaalaya VBA si ay u sameeyaan tilmaamo aan kala go 'lahayn ee Excel si ay u qaataan kadib.
VBA ma aha oo keliya hadyado aan badneyn. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa VBA si aad ugu biirto kartida cusub ee Excel (tusaale ahaan, waxaad kobcin kartaa xisaabin cusub si aad u baarto macluumaadkaaga, ka dibna ka faa'iideysiga awooda qoraalka ee Excel si aad u muujiso natiijooyinka), iyo inaad samayso khaladaad isku xirta Excel xafiisyada kale ee Xafiiska, Tusaale ahaan, Microsoft Access 2010. Xaqiiqo ayaa loo sheegaa, dhammaan Xafiiska Xafiiska, Excel waa midka ugu badan ee loo isticmaalo sida wax ka dhacaya marxaladda horumarinta guud. Hase yeeshee, dhammaan hawlaha la taaban karo oo ay ku jiraan diiwaanada iyo xisaabinta, horumariyeeyaashu waxay isticmaalaan Excel si ay u sameeyaan waxqabadyo ka yimaada fahamka macluumaadka ee barnaamijka horjoogsiga.
Iyadoo aan loo eegin inta badan dareenka weyn ee isticmaalka VBA ee Excel 2010, xusuusnow in jawaabta ugu fiican ee arrintani aysan ku jirin VBA hab kasta. Ka sarreynta waxa laga filayo wuxuu leeyahay xayawaan badan oo xitaa iyada oo aan la haysan VBA, sidaas darteed xitaa macmiil awood leh maahan in la ogaado dhammaantood. Ka hor intaadan dejin qorshe VBA, fiiri Gargaarka iyo hantida internetka oo dhan si loo hubiyo in aysan jirin hab sahlan.
Windows Server 2016 wuxuu soo bandhigayaa waxyaabo cusub oo maamul iyo nidaamyo awood u leh oo hoos u dhigaya abaabulidda dabeecad badan oo isdaba-joog ah iyada oo hoos u dhigeysa kharashyada iyo maamulidda maamul-la'aanta. Astaamahaan waxaa ka mid ah:
- Maareynta Cinwaanka IP (IPAM). Tani waxay bixisaa nidaam u xoojiya waxyaabo muujinaya, maamulka, iyo hubinta cinwaanka IP-ga gudaha nidaamka ururka.
- Shabakadda Hyper-V Network Virtualization. Tani waa badeecada ku jirta habka abaabulka (SDN) ee awoodda kuu siinaya inaad ku xallisid caqabadaha la qabsashada ee xogtaada adiga oo adeegsanaya mashiinka farsamada (VM) ee ka jira nidaamka aasaasiga ah ee muuqda oo ku xiran ama u hogaaminaya, sida waddada VMs ay ka soo jeeda qalabka ee qolka jireed.
- Gawaarida fara badan ee Hyper-V. Tani waxay ku siinaysaa naqshad lagu daboolayo shuruudaha u dejisan ee amniga, xayiraadda, heerarka waxtarka, iyo degsiimada deganaanshaha.
- Kooxda NIC. Kaarka kaabiga ah kaararka kaararka dhexdhexaadinta (NIC) waa isku xirnaanshaha ugu yaraan labo xirmooyinka kombiyuutarka ee kombiyuutarka oo keli ah si loogu qaado NIC oo keli ah gudaha gudaha Windows.
Koorsadan Tababarka MTA waxay kaa caawineysaa inaad qorsheyso imtixaanka Microsoft Technology Associate 98-365, iyo soo saarida faham mawduucyadan: Xaqiijinta Server, Doorarka Server, Active Directory, Kaydinta, Maareynta Waxqabadka Server, iyo Dayactirka Server. Koorsadani waxay saameyn ku yeelanaysaa walxaha aan la garaneynin ee laga helo buugga Maaddada Waxbarashada ee Microsoft (MOAC) ee imtixaankan.
Microsoft Technology Associate (MTA) ayaa ah midka ugu cusub ee imtixaannada shahaadada cusub ee Microsoft oo ansixiyey waxbarashada muhiimka ah ee la rajeynayo in ay bilaabaan dhisida xirfad ayadoo loo adeegsanayo horumarinta Microsoft. Barnaamijkani wuxuu bixiyaa marin haboon oo muujinaysa xirfad mustaqbalka ah oo ku salaysan naqshad cusub waxaana laga rajeynayaa in yar oo gacmeed gacanqabasho ah ama diyaarinaya si kastaba ha ahaatee aan aqbalin fahamka shaqada.
Faahfaahin Xidhiidhinta Qalabka
Fahmaan Doorka Suuqa
Fiiri Tusaha Hawl-galka ah
Fahmee Maareynta Kartida Macmiilka
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo koorsooyinka shahaadeynta waxay fahmeysaa barashada muhiim u ah qaabeynta, dirista, iyo sii wadida Microsoft Xarunta System 2012 Orchestrator. Koorsadani, fahmayaasha waxaa lagu ogaaday waxyaabo kala duwan oo ka mid ah Xarumaha Nidaamka Nidaamka, ka dibna ka dib markaad ogaatid sida orchestrator 2012 loo qaabilo oo loo gudbiyo gudaha Xarunta Xarumaha. Sidoo kale, koorsadani waxay ku jirtaa qalabeynta hababka loogu talagalay inay wax ka qabato xaaladaha kala duwan, kuwaas oo laga yaabo inay khibrad u yeeshaan bii'ada ganacsiga. Marka lagu daro miraha koorsada, fahamku waxa uu yeelanayaa waxa muhiimka u ah inuu kormeero orchestrator 2012 ugu faa'iidada badan ee ganacsiga. Koorsadani waxay xoojineysaa xayeysiinta barashada furan, sidaas darteed fahamku wuxuu ka shaqeyn karaa sidii loo adeegsan lahaa xalalka ganacsi ee xaaladaha dhabta ah.
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo shahaadada waxaa loogu talagalay khabiirada IT-da kuwaas oo imika haysta barasho khaas ah oo ku saabsan qaababka ay u baahan yihiin si ay ula sameeyaan Orchestrator 2012 .. Koorsadani sidoo kale waxay khubarada IT u baahan tahay inay fahmaan qaybaha aasaasiga ah ee qaab laga yaabaa in loo baahdo kombiyuutar.
U sharax qayb ka mid ah Orchestrator 2012 iyo dhamaan xarunta Xarunta Xarunta
Sii dib u eegida ITIL iyo MOF
Soo bandhiga oo diyaarso orchestrator 2012
Isbadel, hagaajin oo cabir qalabka Orchestrator 2012
Hirgalinta rikoodhka rikoodhiga ee foomamka Windows ee xaafadda
Abuuri buug-gacmeedyo kobcaya oo isticmaalaya xaalado la xaqiijin karo
Qalabka isku dhafan ee xarumaha Nidaamka Nidaamyada iyo Microsoft
Samee qaabeynta khaladaadka ku saabsan daryeelka iyo hubinta baaritaanka
Samee farsamooyinka soo kabashada musiibada
Ku dhaqan hirgelinta nadiifinta iyo baaritaanada ee Orchestrator 2012
MCSE SQL Server 2014 Datashiga Xogta waxay u fasaxaysaa khabiirada IT-da si ay u abuuraan oo ay u sii wadaan mashaariicda waawayn ee mugdiga ganacsiga ama hirgelinta macluumaadka hore. Koorsadani waxay ku fiican tahay kormeerayaasha xogta ee ka mas'uulka ah qorshaynta iyo kormeerida macluumaadka kaydka ee xaaladaha ganacsi ee waaweyn. Shahaadada MCSE ee ku saabsan horumarinta macluumaadka waxay xubnaha ka dhigeysaa inay awood u yeeshaan uur qaadidda iyo qaabaynta xogta xogta, oo ay ku jiraan awoodda, maqaallada iyo server-yada.
Xubnaha loo doortay kooraskan waxay dabooli doonaan aragtiyada la socda ee ku jira barnaamijkan diyaarinta SQL Server 2014:
Soo bandhigida, naqshadeynta, soo bandhigida, iyo haynta xogta macluumaadka Microsoft ee ku hawlan sameynta
Hirgelinta iyo baaritaanka dibad-bixinta xogta ee SQL Server
Su'aalaha weydiinaya SQL 2014 Server
Maareynta xaaladaha xogta xogta SQL Server 2014
Hirgelinta xarun macluumaad qeybin ah oo leh serverka 2014
Xalka ugu dambeeyay ee xogta database 2014
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo Shahaadada ee ugu dambeyn ee Microsoft SQL Server wuxuu ka caawin doonaa khubarada in ay kobciyaan macquul kasta dhinac kasta oo kormeeraya xalka macluumaadka ganacsiga iyo xaaladaha xogta si guul leh.
Kooxda muhiimka ah ee dadka indha-indheynaya ee koorsadani waa xog-ururin iyo khabiiro ganacsi (BI) oo ka warheynaya SQL Server 2008 waxaanay u baahan yihiin inay kiciyaan waxqabadkooda SQL Server 2014, iyo in ay raaxo ku yeeshaan horumarka macluumaadka Microsoft.
Hagaha Dejinta Microsoft Office 365 ee Macaamiilku wuxuu soo bandhigayaa qorshe muhiim ah oo habaynaya fikradaha iyo nidaamyada ururka. Kaalinta dirista waxaa lagu xalliyaa aagagga siiya noocyo kala duwan oo xog ah oo ku saabsan noocyada gaarka ah ee iskuulada ee ururkaaga.
Halkaan waxaad ka arki kartaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u ogaan doonto:
Kala soocida Qeybta. Qalabkani wuxuu siinayaa dawlad aan caadi aheyn in uu ka qayb galo qorshaha iyo shuruudaha rasmiga ah ee u diraya Xafiiska 365. Waxay leedahay xog faa'iido leh oo loogu talagalay madaxa IT-gaaga, agaasimaha barnaamijka, iyo fulinta takhasuska.
Qorsheyso oo u diyaari qaybaha. Qaybahani waxay muujinayaan laylisyo gaar ah iyo layliyo loo baahan yahay si ay u diyaariyaan una fuliyaan nidaamkaaga Xafiiska 365. Hawlgalku wuxuu ku salaysan yahay qaybta ugu badan ee lagu soo bandhigo codsiga aad ka hadleyso iyaga oo ku jira qorshahaaga. Mawduucyada laga hadlo aagga Qorshaha ee qaybta ugu badan ee ku soo noqota qaybta diyaarinta ee "Prepare segment" iyo tilmaamaha sameynta waxqabadka. Qorshaha iyo goobaha diyaarinta waxaa ku jira waxyaabo u sahli doona noocyada gaarka ah ee khabiirada cusub ee cusbataallada ee ururkaaga.
U guuri qaybta. Meelahan waxay sawiraysaa tilmaamaha loogu talagalay sanduuqyada waraaqaha macaamiisha ee Xafiiska 365 si aad u bilaabi karto isticmaalka Xafiiska 365 sida muuqaal ka mid ah abuurista deegaanka.
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo shahaadada waxay tilmaamaysaa sida loo soo bandhigo loona xalliyo codka jimicsiga Microsoft Lync Server 2013 iyo maamulka Lync Online. Koorsadani waxay ku siin doontaa macluumaadka iyo awoodahaaga si ay u dejiyaan oo ay ula macaamilaan Lync Server 2013 oo ku yaala dhismaha, Lync Online ee daruur ama urur isku dhafan. Waxyaabaha kale, waxa ay bixin doontaa qaababka loo baahan yahay IT ama khabiirada isgaarsiinta si ay u gudbiyaan Lync saldhig u sameynta cod bixinta. Koorsadani waxay ku tuseysaa sida loo qaabeeyo Lync Server 2013, sidoo kale waxay bixisaa shuruuc, habdhaqanka ugu fiican, iyo fikradaha kaa caawin doona inaad hagaajiso nidaamka codka jimicsiga. Koorsadani waxay ka caawisaa fahamka inay diyaar u yihiin imtixaanka 70-337.
Koorsadan cusub ee tababarka Microsoft iyo koorsooyinka shahaadada ayaa la filayaa khabiiro IT Consultants iyo khubarada la-talinta ee isgaadhsiinta iyada oo aan ka yareyn saddex bilood oo la kulmayo soo bandhig, diyaarinta, dirista iyo hirgelinta xalalka is-dhaafsiga is-dhexgalka (UC) (VOIP). Maskaxiyan waa in uu lahaado karti uu u leeyahay inuu turjumo ganacsiga shuruudaha injineernimada gaarka ah iyo qorshaha habka UC. Maqaalku waa inuu sidoo kale u leeyahay habka muhiimka ah ee Windows Server 2012.
Qorshee qorshe cod-bixineed oo jilicsan
Usheeg oo qorshee maamulida habeynta Lync 2013
Diyaarso arrimo Lync Server 2013 Server
Xaqiiqo raadinta cod bixinta dhibaatooyinka
Diyaarso lana naqshadee Lync Online ama nidaam isku xidhan
Koorsada tababarka Microsoft iyo Shahaadada ee Maamulka Adeegyada iyo Ammaanka ee Exchange Server wuxuu wax ka barayaa maamulka iyo naqshadeynta Microsoft Exchange Server 2013 si sahlan. Ganacsiga 2013 waa marxalad ka timid Microsoft oo ku siinaya xalka warqad, warqad, iyo noocyo kala duwan oo loo adeegsado wargalinta codsiyada iyo dadaalka isku-dubaridka. Xubnuhu waxay heli doonaan xog aad u ballaaran oo ku saabsan samaynta, diyaarinta, iyo kormeerka kaabayaasha MS Exchange, tusaale ahaan, qaybaha sanduuqa boostada, macaamilka ayaa helaya, iyo gaadiidka fariinta. Symantec Mail Security ee MS Exchange waxay isku darsamaan Symantec Antivirus si ay u bixiyaan e-mail ka hubsashada xakamaynta, phishing, infekshinka, iyo waxyeelooyinka kale ee xanaaqsan marka loo fasixi karo istiraatiijiyadaha istiraatiijiga ah ee Istaraatiijiyada Exchange. Symantec Security waa intaa dheer oo ah moduleka Symantec Protection Suite oo siinaya kabadhada gaashinka adoo joojinaya khatarta email-ka ee ku jira gudaha waxayna u adeegtaa sida safka ugu horreeya ee ilaalinta khatarta haddii ay jirto inay dhacaan niyad jabka iyo dukaamada boostada. Symantec Security waxay saameyn ku leedahay Symantec AntiSpam, oo ay gacanta ku hayaan naqshadaynta Brightmail, si ay u diidaan inta badan ee spam soo socda.
Ururkan muhiimka ah ee dadkani koorsadani waa khabiiro Information Technology (IT) oo isku dayaya in ay ku dadaalaan heerka sare ee maamulka sare. Dadka kale ee qaadan kara koorsadan waxay ku daraan IT-da guud iyo inay ka caawiyaan khabiirada goobta shaqada kuwaas oo u baahan inay wax ka ogaadaan Exchange Server 2013. Madaxda gelaya koorsada waxaa lagu tiirsan yahay in aysan ka yarayn 3 sano oo waayo-aragnimo ah oo ka shaqeynaya aagga IT- caadi ahaan xuduudaha nidaamka nidaamka, ka caawinta aagga shaqada, ama ururada qaabdhismeedka. Uma maleynayaan in ay ku lug lahaanayaan foomamkii Exchange Server ee horay loo soo ururiyey Ururinta caawinta dadka ee koorsadani waa khabiiro rajeynaya inay qaataan imtixaanka 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Solutions Solutions, oo ah mid madaxbannaan, ama sida weyn qaabka shuruudaha MCSE: Shahaadada Microsoft Exchange Server 2013 waxay qaadan doontaa koorsadan sida maaddada qorshaynta.
Koorsadan tababarka ee Microsoft iyo Shahaadada waxay ku siin doontaa barashada iyo waxqabad si aad u sameysid, u dirto, kormeerka, amniga, iyo xoojinta Microsoft Exchange Server 2013. Koorsadani waxay ku tuseysaa sida loo xalliyo Exchange Server 2013 oo ku siiya macluumaadka aad ku faahfaahinayso, sii wadayso, iyo baaritaanka Exchange Server 2013. Koorsadani waxay sidoo kale siin doontaa shuruuc, habdhaqanka ugu fiican, iyo fekerka kaa caawin doona inaad xoojiso fulinta oo aad yarayso khaladaadka iyo khatarta amaanka ee Exchange Server 2013.
Dir oo kormeerka Exchange Server 2013.
Diyaarso oo naqshadee qaybta adeegga boostada.
Maqnaanshaha maqaarka ka faa'iideysta, habka cinwaanka, iyo cinwaanka Exchange Server 2013.
Qorshee oo fuliyaan qaybta adeegga Macmiilka ee Client 2013.
Si ammaan ah u samee una samee naqshadeynta Microsoft Outlook-ga Macmiilka iyo wax-qabad badan oo ku-sheegaysa isticmaalka Macmiilka
Fahamsan iyo kormeerida server-yada Access Client Access ee Exchange Sever 2013.
U diyaargarowga dhibaatada dhexdhexaadinta, fulinta xoojinta iyo dib u soo kabashada Exchange Server 2013.
U samee oo dhejinta gaadiidka fariinta ee ururka Exchange Server 2013.
U diyaari habka amniga farriimaha, oo ku habboon xalalka antivirus, iyo fulinta cadaawada si loo helo isbaarada.
Diyaarso ogolaansho iyo hubso Exchange Server 2013.
Screen, kor u, iyo baaro deegaanka Exchange Server 2013.
Dadweynaha muhiimka ah ee koorsadani waa khabiiro Information Technology (IT) oo raadinaya inay ku dadaalaan guddoomiyeyaasha heerarka warbixinta. Dadka kale ee qaadan kara koorsadan waxay ku daraan IT-da guud iyo inay ka caawiyaan khabiirada goobta shaqada kuwaas oo u baahan inay wax ka ogaadaan Exchange Server 2013. Maamulayaasha soo galaya koorsada waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan wax ka yar 3 sano oo waayo-aragnimo ah oo ka shaqeynaya aagga IT-caadi ahaan deegaannada nidaamka nidaamka, caawinta aagga shaqada, ama ururada qaabdhismeedka. Uma maleynayo in ay ku lug lahaan lahaayeen horey u adeegsiga Exchange Server.
Kooxda kaalmeyneyaasha daawadayaasha ee koorsadani waa khabiiro rajeynaya inay qaataan imtixaanka 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Solutions Solutions, oo ah mid madaxbannaan, ama qayb ka mid ah shuruudaha MCSE: Shahaadada Microsoft Exchange Server 2013 koorsadan u qaado sida qorsheynta alaabta.